ဘာကြောင့် ဆန်ချိုကို မန်စီးတီးသို့ ပြန်ခေါ်ယူဖို့ ဂွါဒီယိုလာ လုံးဝစိတ်မဝင်စားရသလဲ? – Play Maker Sports Journal
ဘာကြောင့် ဆန်ချိုကို မန်စီးတီးသို့ ပြန်ခေါ်ယူဖို့ ဂွါဒီယိုလာ လုံးဝစိတ်မဝင်စားရသလဲ?
The Mirror သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာဟာဆန်ချိုရဲ့ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်၂၀၁၇ခုနှစ်တုန်းကအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ရဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသို့မလာဘဲဆန္ဒပြကြိုးပမ်းခဲ့မှုနဲ့အတူပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့လုံးဝမစဉ်းစားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဘာေၾကာင့္ ဆန္ခ်ိဳကို မန္စီးတီးသို႔ ျပန္ေခၚယူဖို႔ ဂြါဒီယိုလာလုံးဝစိတ္မဝင္စားရသလဲ?
The Mirror သတင္းစာရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရမန္စီးတီးနည္းျပဂြါဒီယိုလာဟာဆန္ခ်ိဳရဲ႕ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္၂၀၁၇ခုႏွစ္တုန္းကအသင္းကထြက္ခြာခြင့္ရဖို႔အတြက္ေလ့က်င့္ေရးကြင္းသို႔မလာဘဲဆႏၵျပႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈနဲ႔အတူျပန္လည္ေခၚယူဖို႔လုံးဝမစဥ္းစားတာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။